Salman Abedi oo la runsan yahay inuu ka dambeeyo weerarkii Manchester | Somaliska
Salman Abedi oo la runsan yahay inuu ka dambeeyo weerarkii Manchester
Weerarkii lugu qaaday goob xafalad faneed ka socotay oo ku taala magaaladda Mancheter ee dalka Ingiriiska, ayaa haatan la shaaciyey in uu soo fuliyey nin lugu magacaabo Salmaan Abedi. Ninkan ayaa sidii kale ka tirsanaa kooxda la baxday dowlada Islaamiga ah ee Daacish.
Warxaafadeed uu maanta gelinkii dambe qabtay madaxa booliska Manchester Ian Hopkins, ayuu sheegay in ay runsan yihiin weerarkaasi dad badan ku dhinteen uu fuliyey naftiis hurahaasi Salaam Abedi.
“Waxaan cadeeynayaa in ninkaasi la tuhunsan yahay ee fuliyey weeraradaasi sheegtay magaca Salaam Abedi, laakin si guud weli loo cadeeyn, sidaas daraadeedna dooni maayi inaan waxbixin intaan ka badan sheego” ayuu yiri Hopkins oo farta ku fiican in haatan boolisku ahmiyada saarayaan sideey ku ogaan lahaayeen in ninkaasi keligii fuliyey howlgalkaas iyo in kale.
Booliska ayaa habeenimadii xalay aheyd waxaa ay soo qabteen 22 jir lala xirriirinayo falkaasi, waxaa ay sidoo kale u dhaceen guryo la tuhmayo oo magaaladda ku yaala kana soo qab qabteen sadex ruux. Inkastoo kooxda Daacish maanta ay sheegatay weerarkii Manchester, hadana boolisku waxaa ay sheegeen in weli aanu u kala cadeeyn sideey iskugu xirnaayeen nin weerakaasi fuliyey iyo kooxda Daacish. Weerarkii lugu qaaday magaaladda Manchester ayaa waxaa ku dhintay dad garaya 22 ruux oo ku jireen carruuro badan, halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 60 ruux. Waana weerarkii 11aad ee dalkaasi lala beegsado. Weeraradan oo ay kala furiyeen kooxo kala duwan haba u badnaadaan kuwo ay kooxaha islaamiyiintu sheegtaan.
Telefishinka SVT oo doonaya in Quranka si casri ah loo fasiro
Weeraradii London raggii fuliyey oo la shaaciyey magacyadoodii iyo muuqaalkoodi